Ndị ọzọ iji weghachi steeti ụlọ nrụpụta na Chromebook | Akụkọ akụrụngwa
Dị ka akụrụngwa ọ bụla anyị nwetara n'oge enyere, nhazi ya mgbe oge were ga-adị iche na ihe anyị gaara achọta n'ọnọdụ mbụ ya; na Chromebook adịghị iche na ọrụ ndị a site na onye ọrụ, onye na-emekarị hazie ha dika mmasi na nkpa gi.
N'otu aka ahụ, n'ihi ụdị mgbanwe ndị a, sistemụ arụmọrụ kọmputa anyị nwekwara ike ịda, n'oge nke anyị ga- laghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke a bụ ebumnobi anyị ga-atụle n'isiokwu a mana raara onwe ya nye Chromebook na n'okpuru usoro ọrụ dị iche iche.
1 Iji njirimara Powerwash na Chromebook
2 Gbanyụọ Onye Mmepụta iji Wụnye Chrome Os
3 Ingmepụta usoro mgbake iji wụnye Chrome Os
4 Mee usoro mgbake na Chromebook
Iji njirimara Powerwash na Chromebook
Ihe mbu nke anyi gha ekwuputa bu nke a, ya bu, na oru nke ichota dika akụkụ nke sistemụ arụmọrụ nke Chromebook. Nke a chọrọ iji njikọ Wi-Fi, dịka ọ ga-adị a mgbake dabere na ígwé ojii ihe ọrụ a na-atụ aro anyị. Iji nwee ike ime ya, naanị ihe anyị ga-eme bụ ịgbaso usoro ndị a:
Anyị na-agbanye anyị Chromebook.
Anyị na-amalite nnọkọ Google site na nzere dị iche iche.
Anyị na-emeghe Chrome na Chromebook.
Anyị na-abanye nhazi ahụ.
Ugbu a, anyị na-aga ala nke ihuenyo ahụ.
N'ebe ahụ ka anyị rụọ ọrụ «gosiputa nhọrọ di elu".
Anyị na-achọ ọrụ nke Nchacha ọkụ ma anyị họrọ bọtịnụ ya.
Anyị na-amalitegharịa kọmputa.
Site na usoro ndị a anyị ga-agaghachiworị na ntọala ụlọ ọrụ na Chromebook, ka e wee kpochapụ data nke anyị nke anyị ahazi na mbido kpamkpam.
Gbanyụọ Onye Mmepụta iji Wụnye Chrome Os
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na gị Chromebook dị ka a Mmepụta, mgbe ahụ ị ga-gbanwetụrụ ole na ole sistemụ nhọrọ na-arụ ọrụ were were. Maka ụdị ikpe a, enwerekwa ike iweghachite akụrụngwa na steeti ụlọ ọrụ mmepụta ihe, naanị ịme ihe ndị a:
Anyị na-agbanyegharị anyị Chromebook
Ihuenyo nyocha Chrome Os ga-apụta.
Kama ịpị CTRL + D ka ịwụfere na peeji nke onye ọrịa, anyị pịa ya Oghere.
Na usoro a Mmepụta Mode ga-nkwarụUsoro ntinye sistemụ arụmọrụ na-abịa na akpaghị aka mgbe nke ahụ gasịrị.
Ingmepụta usoro mgbake iji wụnye Chrome Os
Usoro anyị na-atụ aro n'elu dị irè maka gburugburu ọrụ dị iche iche; onye nke mbu zubere ime hichapụ akaụntụ niile ahụ anyị hazie, nwee ike mechara ree Chromebook n’enweghị ụjọ ọ bụla na a ga-enyocha ụdị ozi a. Okwu nke abụọ yiri nke ahụ, usoro ndị na-atụle ọrụ nkịtị (ma ọ bụ nke ọma) nke akụrụngwa. Mana enwere ike bụrụ na ọ nwere arụmọrụ dị njọ, na-abịa n'oge ahụ, mkpa ọ dị jiri ụdị mgbake mgbake na anyị mepụtara na mbụ.
I nwere ike ịna-eche Kedu ka ị ga - esi nweta Chrome Os ma ọ bụrụ na kọmputa anaghị arụ ọrụ? Nke ahụ bụ akụkụ kachasị mma niile, ebe naanị ị ga-eche ihu njikọ a wee budata ngwa ahụ na ga-n'ịwa a n'aka nke iweghachite na osisi USB ma ọ bụ kaadị micro SD, nke gafere 4 GB nke nchekwa. Mgbe nke ahụ gasị, naanị ihe anyị ga-eme bụ ibidogharịa Chromebook.
Ngwa anyị kwadoro ka enwere ike igbue na enweghị nsogbu ọ bụla na kọmputa nwere Windows, Linux, Mac Os X na ọbụlagodi Chromebook dị iche.
Mee usoro mgbake na Chromebook
Nke a nwere ike ịbụ ihe ndị kasị dị mgbagwoju anya usoro ịrụ ọ bụ ezie, dịkwa irè. Ọ bụrụ na usoro ndị a tụrụ aro n'elu arụghị ọrụ, mgbe ahụ ọ bara uru ịnwale nke ọzọ, nke bụ ụdị ụdị ọrụ nke onye ọrụ ahụ.
Iji mee nke a, naanị anyị ga-akwụ ụgwọ Chromebook ma mesịa, jide igodo ma ọ bụ bọtịnụ 3 n'otu oge:
Igodo ume, nke a na-ahụkarị na igodo ọrụ F3
Igodo "ike ma ọ bụ ike".
Site n'ime nke a, Chromebook ga-agbanye n'ime "ọnọdụ mgbake" yana nke ahụ, a ga-enwetaghachi sistemu arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Laghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Chromebook anyị
Ihe 17 kwuru, hapụ nke gị
NNỌỌ. Nsogbu m bụ nke a. Ana m ebudata ngwa dị ka nnweta. MGBE M GWARA NA HLỌ AKWRKWỌ AH CR C AKW DKWỌ AH ,R,, M P APR A LLỌ AKW OFKWỌ nke njehie a na-atụghị anya ya. Kedu ka m ga-esi dozie nsogbu m
Zaghachi na WALTER
gaby lopez dijo
otu nsogbu walter na ichere azịza biko biko
Zaghachi gaby lopez
Norman Gerardo Rojas R. dijo
Enyemaka! Anọ m na-agbalị ruo ọtụtụ ọnwa na dị iche iche mbughari draịva na ọ dịghị ihe, na-atụghị anya njehie na-egosi.
Zaghachi Norman Gerardo Rojas R.
tụnyere abụghị naanị eziokwu ahụbeghị m otu esi edozi nsogbu a ... ọ bụrụ na onye ọ bụla maara na achọrọ m enyemaka
Ami ọ mere m mana ọnwụnwa nke abụọ m rụrụ ọrụ n'ụzọ a ma m mere ya site n'ịgbanwe eriri na njikere nsogbu edozire na-anwa.
Ọ bụrụ n ’ị dozighị ya, ị nwere otu usoro ahụ wee lelee ụfọdụ nkuzi ami m nwetara njehie mana na mbọ nke abụọ m meziri ya n’ihi na m jiri 8 gb usb ọzọ mee ya, chioma.
Otu ihe ahụ na-eme m, ebudatara m ya na USB abụọ (otu 8G na 16G nke ọzọ) na ọ nweghị ihe na njedebe na-agwa m njehie a na-atụghị anya ya. Biko nyere aka
Jaime, i nweghachiri usoro nbudata ngwa ọrụ ahụ iji jide n'aka na emechara ihe niile n'ụzọ ziri ezi mgbe ahụ ị gbanyụọ chromebook, tinye eriri wee gbanye ya ma nwee ihu ọma ọ gbanye n'ụzọ ziri ezi.
onye nleta dijo
Nsogbu m no na chromebook bu na o di na onodu obia kedu ka m ga esi dozie ya biko nyere m aka.
Zaghachi nye wesler
Carlos Garcia kwuru dijo
Hehe m ka nọkwa n'otu ihe ahụ, ọ na-agwa m njehie m na-atụghị anya ya, ọ bụrụ na mmadụ edozi ya n'ụzọ ọzọ, mee ka m mara.
Zaghachi Carlos Garcia
Ana m agbalị mgbe niile ma ana m enweta otu njehie ahụ na-atụghị anya ya.
enyere m aka nwere otu nsogbu gị
Giselle pita dijo
Abụ m otu! Na-atụghị anya njehie na akuko (ugbua nwalere na 3 eriri ngwaọrụ).
Zaghachi Giselle Peters
Ọ dị onye chọtara azịza?
Ọ naghị arụ ọrụ m na-agbaso usoro ndị ahụ na naanị ihe na - eme bụ na mgbe m tinyere eriri m ma mee usoro m na - enwetaghị windo ahụ kwesịrị ịpụta.
Carlos Mendez dijo
Ha gbachapụrụ bios mana ha emechaghị usoro ọ na-eru ebe ị ga-eme iwu site na shei ha chọrọ ịgbanwe gaa na windo ma enweghị m ike ịchọta ihe m ga-eme.Echeghị m ya na mgbake USB
ọ bụ chromebook acer c710
Zaghachi carlos mendez
Enwere m otu nsogbu ahụ, enwetara m njehie a na-atụghị anya ya ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara na agbalịrịla m ọtụtụ ngwaọrụ USB ma ana m enweta otu njehie ahụ, biko, ọ bụrụ na mmadụ maara, biko mee ka m mara
Etu esi etinye foto anyị na ebe nchọta nke Firefox